Sangano reZUDAC rinokumbira hurumende kuti ipindire pakati payo nevashandirwi
Sangano rinomirira vatyiari vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatira basa, re Zimbabwe Union of Drivers and Conductors, (ZUDAC) riri kukumbira hurumende kuti izvipire mukupindira pakagava raro nevashandirwi sezvo richiti mashandiro ari kuita nhengo dzaro ari kuramba achiipisisa.
Mutungamiri weZUDAC, VaFredrick Maguramhinga, vaudza Studio 7 kuti makambani avanoshandira haasi kuterera zvichemo zvavo.
Zvihemo izvi zvinosanganisira kushaya rubatsiro kana vakaita dambudziko vari pabasa kunze kwenyika uye kushaikwa kwemari yemudyandigere. Vanotiwo vari kuisa hupenyu hwavo panjodzi nekuenda kunyika dzine hondo dzakaita seDRC neMozambique uye vachitakurawo michetura nezvimwe zvakakosha.
Nekuda kwekusagadziriswa kwezvichemo izvi, VaMaguramhinga vanoti vashandi vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa.
Asi mutauriri we bazi re zvekutakurwa kwezvinhu, Engineer Thedius Chinyanga, vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa sangano reZUDAC mukana wekutaura zvinovanetsa, vachiti havanzwisisi kuti sei ZUDAC ichiti haisi kupiwa mukana wekutaura zvinonetsa vashandi ava.
VaChinyanga vati havaoni zvichibatsira kuti ZUDAC iyende kuvatori venhau isingaende kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu, uko vakamboita hurukuro negurukota re zvekutakurwa kwezvinhu.
Asi vamwe vashandirwi vanoti naivo vakaomerwavo nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye kumanikidzwa kushanda pasi peZUPCO.
Munyori mukuru weGreater Harare Association of Commuter Operators, VaNgoni Katsvairo, vanoti mari dzavari kuwana mukushanda neZUPCO dzishoma.
Hatina kukwanisa kubata veTransporters Operators Association of Zimbabwe sezvo nhare dzekumahofisi avo dzange dzisiri kudairwa.
Hurukuro naVaFredrrick Maguramhinga